Phakathi kwezakhiwo abaningi beshiya eMoscow kuphawuleka ngokukhethekile samabhizinisi "Zenith", noma njengoba ibizwa ngayo ekuphileni kwansuku zonke - Blue tooth. Like igama yendlu elinikwe isizathu - kuba ezakheke empeleni ufana izinyo womuntu. Okuphawulekayo Kuyaphawuleka ukuthi sakhiwo saklanywa saba ngisho eMoscow, kodwa has a uncharacteristic kakhulu ngezakhiwo zaleli dolobha. Ochwepheshe abaningi bakholelwa ukuthi awalethe abanjalo bangabaphostoli namabhilidi ejwayelekile ngaphezulu European.
Kubalulekile nokukhumbula, futhi izingozi ukuthi silungiselela zonke izimenywa zawo-Blue tooth. Moscow ugcwele yezimfihlakalo ezingaxazululeki, futhi lena ngenye yazo - imfihlakalo, hhayi kuphela abalahliwe, kodwa namanje isakhiwo sidle. Kuningi izindaba abanalo Uphahla lwangaphakathi kanye ezitebhisini akunalutho kungekho izinyathelo. I Kungashiwo okufanayo mayelana imiphini ikheshi e-Blue tooth. Okokuqala, kukhona ngendlela emangalisayo yabo kakhulu, futhi okwesibili, ukuthi wonke ayinalutho, ngakho ziyingozi enkulu kubo bonke abavakashi. Futhi, ngenxa yokuthi lesi sakhiwo wayengumJuda umsebenzi wokwakha, okuyinto ngempela awazange eseqedile, ngoba izindonga ngokuvamile 'akhathalele' ukuqinisa izinduku, engabangela umonakalo empilweni.
Ukwakhiwa izakhiwo Blue tooth limiswe phakathi neshumi leminyaka elidlule, kodwa, namanje isibalo olusemthethweni samabhizinisi, ephethwe nguhulumeni wasekhaya. Ngokusho kwabezindaba, manje phezulu sidle zithengiswa kusukela abanikazi bayo zamanje ngeke zenziwe ifake isandla ekubuyiselweni kwalo.
Kukhona isivikelo kakhulu ukuthi akavumeli muntu e-Blue tooth. Indlela angena kuwo, ukwazi abalandeli wendawo ishiywe izakhiwo - kukhona ezinye zezindlela esibonisa ngazo ungafaka egumbini buthule futhi ngokushesha kukhona. Nokho, lokhu akusho ukuthi nakanjani onogada musa ukubamba izivakashi e isakhiwo - ngokuvamile "ikamu" yakhe, exosha zonke ezemidlalo abathanda kakhulu. Ngakho-ke, kanye Blue tooth, udinga ukuba zithule, ehlanzekile futhi buthule. Khona sizokwazi ukuhlola isakhiwo, izici yalo yayenziwe, kanye ifotho panorama esivula kusukela izibuya zayo phezulu.
Ukuthola phakathi Blue tooth, ukwesaba akuyona kuphela onogada kanye isimo esiphuthumayo lapho isakhiwo. Ngokuvamile lesi sakhiwo wavakashelwa izigangi namasela, waqoqela ndawonye wonke amasango ungqongqoza ingilazi. Le ndawo akuyona hangout abantu abangenamakhaya noma zobugebengu, kodwa, ngeshwa, ngezinye izikhathi labo lapho ungakwazi "iqhubu". Sekukonke, lokhu kuyinto isakhiwo ishiywe is ithule cwaka futhi inokuthula uma siqhathanisa nabanye izakhiwo eqandisiwe futhi asihlali muntu eMoscow.
Out of the Blue tooth kumele ethule njengoba ukungena ngaphakathi, uma kungekho isifiso uhlawule wenze debriefing esiteshini samaphoyisa. ligada Guard isakhiwo ngokuphepha futhi endaweni ezungezile, ageje ukuze izinyo ngisho izivakashi ehloniphekile kakhulu futhi ethule. Kodwa bonke abasebenzi uMnyango State, esemgwaqweni umnyango eduze phezulu abalahliwe, abanandaba abavakashela Blue tooth, ngakho ngisho noma ikhombe othile amafasitela ngakolunye uhlangothi, ungakhathazeki.
Ngingayaphi ngisuka ekuphumuleni ngaphandle passport?
Moscow ungena Arch Petersburg
Izindlu Guest, Novorossiysk: ukuthi ungathola kanjani ukubuyekezwa
Uhambo iqala desktop amahle
Lapho kuba efudumele ngoMeyi? Sifunda!
Lolwandle - ukuphumula emva kwezinsuku zokusebenza
Kungani ukuthatha amagilavu off? oneiromancy
Pursuit of Happyness: izenzo - lena ...
I-Paroxysms - iyini?
Eco-friendly ifenisha ngamagumbi zezingane
Umholi wezepolitiki uDilma Rousseff: biography kanye namaqiniso athakazelisayo okuvela ekuphileni
Reducers cylindrical: ulwazi olujwayelekile kanye nezici